Maqal - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 September, 2014, 05:42 GMT 08:42 SGA
Wareysi aan la yeelanay Majaajileyste wiil waalMaqal03:51
WIIL WAAL, oo kuna magacdheer GH ka mid ah dhallinyarada ka qosolsiiya dadka ayaa asigoo ku sugan dalka Itoobiya u warramay BBC. 24 Luulyo 2014
Saameynta xannibaada Khat ka bil ka dibMaqal03:27
Maanta waxaa muddo bil ah laga joogaa markii ay dowladda UK ka mamnuucday dalkeeda in la geeyo Khat-ka, oo ay aad u isticmaalaan bulshooyinka kasoo jeeda Bariga Afrika ee dalkaasi ku nool. 24 Luulyo 2014
Go'aanka ka soo baxay shirka GabdhahaMaqal03:53
Waxaa magaalada London lagu soo gebagebeeyay shir looga hadlayay xuquuqda gabdhaha, isla markaana lagu doonayo ciribtirka gudniinka fircoonka ah iyo hablaha da'da yar lagu guursado. 23 Luulyo 2014
Ma la joojin karaa gudniinka hablaha?Maqal03:48
Waxaa London ka furmay shir looga hadlayo ciribtirka gudniinka fircoonka ah iyo hablaha da'da yar lagu guursado. Hadaba halkee bay gaareen dadaallada lagu doonayo in lagu mamnuuco gudniinka hablaha ee Somaliland.
Ololaha lagula dagaallamayo gudniinka FircoonigaMaqal03:48
Hay'adda WHO ayaa sheegtay in 125 milyan oo isugu jira gabdho iyo haween oo ku nool Afrika iyo Bariga Dhexe uu saameeyay gudniinka fircooniga.
Muqdisho: Shirkadaha telefoonada oo isla hadlayaMaqal02:21
Shirkadaha telefoonada ee Muqdisho ayaa macaamiisha ay is wici karaan hadii ay haystaan talefoono shirkado kala duwan.
Sharciga cusub ee tagaasida MinneapolisMaqal02:58
Darawaliinta tagaasida Minneapolis ayaa ku shaqayn doona sharci cusub oo Soomaalida ay soo dhaweeyeen.
Soomaaliya : Qof la nool AidsMaqal02:11
Nin Soomaali oo qaba cudurka Aidska ayaa waraysi uu BBC siiyay talo siinaya dadka cudurka qaba wuxuuna la shaqeeyaa hayad caawisa dadka.
Sanad kaddib maxaa u qabsoomay?Maqal04:03
Muddo laga joogo sanad ayaa wakiillo ka socday Somaliland iyo Soomaaliya oo wada hadaladu u socdeen waxay Istanbul kaga heshiiyeen arrimo dhawr oo ay ugu muhiimsaneyd in la abuuro guddi wada jir ah oo maamula hawada Soomaaliya. Haddaba maxaa u qabsoomay?
Nimco Jirde oo ka tirsan Oxfam ayaa ka hadleysa xaaladdaMaqal04:08
Saddex Sano kadib markii macluushu ay ka dhacday Soomaaliya 2011, ayaa hey'adaha gargaarku waxay ka digayaan in dalku khatar ugu jiro in mar kale uu dib ugu laabto waxay ku tilmaameen masiibo. Nimco Maxamuud Jirde oo ka tirsan Oxfam ayaa ka hadleysa.